Adora & etc.: April 2015
Facebook + Share
ဖေ့ဘွတ် (Facebook) စပြီးသုံးဖူးတာ ၂၀၀၇ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖရန့်စတား(Friendster) ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ကင်းဆိုက်က ဖေ့ဘွတ်ထက်မြန်မာတွေကြားမှာ ရေပန်းစားပါတယ်။ US မှာဆိုရင်တော့ MySpace ပေါ့။
ဖေ့ဘွတ်ကိုလုံးလုံးပြောင်းသုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖရန့်စတား အကောင့်ကိုလဲ မပိတ်သေးဘဲ ဘယ်ဟာတွေက တော့FB မှာသာတယ်၊ ဘာတွေကဖြင့် ဖရန့်စတားကပိုကောင်းတယ် စသဖြင့် ညီအမတွေ ငြင်းခုန်နေချိန်ပေါ့။ ဥပမာ ပြောရရင် ဖရန့်စတာမှာ ကိုယ့် ပရိုဖိုင်ကိုလာလည်ရင် သီချင်းကြားရတာမျိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့ Page ကို ဘက်ဂရောင်းဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့personalized လုပ်လို့ရတာမျိုးပေါ့။ ဖေ့ဘွတ် မှာ Page အစား Wallလို့ခေါ်ပြီး ဘာမှ personalized လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဖရန့်စတားထက် အပိုပါတာဆိုလို့ Poke လုပ်လို့ရတာပဲရှိတာပါ။ ( ကျမပြောနေတာ ၂၀၀၇ခုနှစ်လောက်က ဖေ့ဘွတ် ပါ။ အခုအခြေအနေမဟုတ်သေးပါဘူးနော်။ ) ဒီထက်ပို မကြိုက်တာက နာမယ်ရင်းထည့်ရတာရယ်။ နာမယ်ပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းမရတာရယ်။ တချို့ personal information ( ကျောင်း၊ အလုပ်၊ အသက်စသဖြင့်) ဖြောက်ထားလို့ မရတာရယ်ပါ။ နာမယ်ကို မြန်မာလို ရေးလို့မရသလို အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားနဲ့ ရေးမယ်ဆိုလဲ "Miss little sunshine" တို့ "Mr ZaaZBCF" တို့ စသဖြင့် အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ နာမည်၊ ပေးလေ့ပေးထ မရှိတဲ့နာမည်မျိုးဆို မရပါဘူး။ တိုတိုပြောရရင် ဖရန့်စတားမှာ ကြိုက်သလိုသုံးလာတဲ့ ကျမ FB ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ရှင်။
ဒါနဲ့ပဲ ညီမလေးကို "နင်ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် ကြီးကဘာမှလဲ မကောင်းဘူး။ ငါ့ဖျောက်ချင်တာ ဖျောက်မရ၊ နာမည်ပြောင်းချင်တိုင်း ပြောင်းမရ။ Poke ကလဲ ငါ့အတွက်အသုံးမဝင်"
ကျမဝမ်းကွဲ ညီမအကြီးမလေးပြန်ပြောတဲ့နက်ဝေါ့ကင်းဆိုက်တွေရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး message ကို ကျမအခုထိ မှတ်မိပါသေးတယ်။ " မမကလဲ... ဖေ့ဘွတ်ဆိုတာ 'ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ကင်းဆိုက်" နော်။ တယောက်နဲ့တယောက်ကို သူတို့ရဲ့ informationပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆက်သွယ်ဖို့လုပ်ထားတာ။ မမ ဟိုဖျောက်ဒီဖျောက် လုပ်မှတော့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပေးမလဲ"
'ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ကင်းဆိုက်" ဆိုတာ တဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်ဖို့လုပ်ထားတာ.. တဲ့။
သူပြောတာ ခုနေခါမှာ ပြန်တွေးကြည့်တော့မှ ဟုတ်သလိုလိုပါပဲ။ 'ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ကင်းဆိုက်" ဆိုမှတော့ လူတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့ရအောင်၊ ဆိုက်မှာပေးထားတဲ့ data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး အသက်အပိုင်းအခြားတူတဲ့ လူချင်း၊ ကျောင်းတူတူတက်ဖူးတဲ့လူချင်း၊ မြို့တမြို့ နယ်မြေတခုထဲတူတူနေသူချင်း၊ အလုပ်တူတူလုပ်နေသူချင်း ဆက်သွယ်မိအောင်၊ ချိတ်ဆက်မိအောင် ဆိုက်က အထောက်အကူပြုနေမှာပဲ။ ခုဆို ဖေ့ဘွတ်ကို သွားစရာမလိုပဲ တခြား ဝက်ဆိုက်တွေမှာ သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်မိရင်တောင် "f Like" ဆိုတာပေါ်နေပြီ။ "Check in" ဆိုတာလဲ သုံးလိုက်ကြတာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်။ ကျမအပါအဝင်ပါပဲ။ ဟော ကိုယ်နှစ်သက်သမျှ၊ ကြိုက်သမျှကို လွယ်လွယ်ကူကူ မျှဝေနိုင်တဲ့ "Share" ဆိုတာလေးလဲရှိနေပြီ။ "Tag" ဆိုတာလေးရော သုံးဖူးပြီးကြပြီမှတ်လား။
ဒီမှာ ကျမပြောချင်တာက "Share" ဆိုတာလေးအကြောင်းပါ။
ဖေ့ဘွတ်မှာ တဦးတယောက်ရဲ့ပုံလဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံနဲ့စာတွဲရက်ကိုဖြစ်ဖြစ် နှစ်သက်သဘောကျလို့ မိမိသူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ကြည့်စေချင်၊ ဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် Share လုပ်ကြပါတယ်။ Share လုပ်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးထဲကမှ တဦးတယောက်ကို မကြည့်မဖြစ်ကြည့်စေချင်တဲ့အခါ Tag လေးတွဲလုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ Tagအလုပ်ခံရတဲ့ သူငယ်ချင်းတင်မကဘဲနဲ့ ကိုယ်က လူအများ (Public) ကို Shareထားရင် ကိုယ်နဲ့သိသိမသိသိ ဖေ့ဘွတ်မှရှိသမျှလူမြင်ရသလို သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ကြည့်ခွင့်ပေးထားရင်လဲ ကိုယ့်အကောင့်ထဲက လူကြီး၊လူငယ်၊ ယောကျား၊ မိန်းမ၊ ရဟန်း ရှင်လူမရွေး မြင်ရတာမျိုးပါ။ ဖေ့ဘွတ်သုံးတဲ့သူတယောက်ဟာ မိမိ ရေးတင်လိုက်တဲ့ စာတကြောင်း၊ ပုံတပုံ၊ အကြောင်းအရာတခုကို တာဝန်ယူ၊ချဉ့်ချိန်ပြီးမှတင်သင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
အဦးဆုံးအနေနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း တွေ၊ နွမ်းပါးတဲ့ နယ်များက သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်း များအတွက်အလှူခံတဲ့ post တွေကို တင်ကြသောသူများ၊Shar၊ကြသောလူများကိုမေးချင်တာပါ။ အလှူခံတဲ့အခါ နွမ်းပါးလှတဲ့ ကလေးငယ်များရဲ့ အနီးကပ် Close up ပုံတွေ မတင်ဘဲအလှူခံလို့ ရနိုင်လား၊ မရနိုင်ဘူးလားဆိုတာကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင် လူမှူရေး၊ ပရဟိတကို ကိုယ်ရော စိတ်ပါ နှစ်ပြီးတစိုက်မတ်မတ် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အလှူရှင်တွေ လှူနိုင်အောင်၊ သဒါစိတ်ပေါက်အောင် ကူညီကြတဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ တကိုယ်ရေတကာရ ဦးဆောင်ကူညီနေကြတဲ့ လူတွေအားလုံးကို တကယ်လေးစားပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေရဲ့ သနားစရာကောင်းလှတဲ့ ပုံတွေတင်တာကိုတော့ သဘောမတူပါဘူး။ တချို့များဆို အကျီတောင် လုံလုံခြုံခြုံမပါပါဘူး။ ကလေးအများစုဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရတာကို သဘောကျတဲ့အမျိုးပါ။ နယ်တွေက နွမ်းပါးတဲ့ ..ကင်မရာအကြီးကြီးတွေသိပ်မမြင်ဖူးရှာတဲ့ ကလေးတွေလဲအများကြီးပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို တချို့ကလေးတွေက ပဲလုပ်၊ တချို့ကရှက်ရယ် ရယ်၊ တချို့ကျ ငေးကြည့်နဲ့ အရမ်းဖြူစင်ပါတယ်။ ငါတို့ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ရောက်သွားမလဲဆိုတာ ဘယ်သူကမှ မပြောသလို သူတို့လေးတွေကလဲ ဂရူစိုက်ရကောင်းမှန်း သိမဲ့အရွယ်လေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ကျမကတော့ နောင်၁၀နှစ် ၁၅နှစ်သူတို့လေးတွေ အင်တာနက်ပေါ်ကသူတို့ပုံလေးတွေမြင်ရင် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုများခံစားရမလဲလို့ ခဏ၊ ခဏတွေးမိပါတယ်။ ကျမတို့လူကြီးအချို့တောင် ကိုယ့်ရဲ့ မအောင်မြင်တဲ့ အတိတ်အချို့တဝက်ကို မေ့ထားချင်တာ၊ လူမသိစေချင်တာ သူတို့လေးတွေထဲက တချို့လဲ တချိန်မှာ အတိတ်ကို မလိုအပ်ဘဲ လူသိမခံချင်တာမျိုးရှိနိုင်တာပဲလေ။ နောက် ၁၀နှစ်မှာ ဒီပုံတွေမရှိတော့ဘူးလို့တော့ မပြောပါနဲ့။ Timeline ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်ကပုံတွေ ရေးခဲ့တဲ့စာတွေ ဖေ့ဘွတ်မှာမြင်နေရသေးတယ်လေ။ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း တွေ၊ သီလရှင်ကျောင်းတွေရဲ့ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ ၊ လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အဲဒီကျောင်းကို မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားအရေအတွက်နဲ့တင်ကိုပဲ အလှူရှင်တွေက သဒါပေါက်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ မျက်နှာအနီးကပ်မဟုတ်တဲ့ အုပ်စုလိုက်ဆော့နေပုံတွေ ထမင်းစားနေပုံတွေနဲ့တင်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းက ပုံတွေတင် မကဘဲ ရောဂါဝေဒနာ တခုခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်အလှူခံတဲ့ post တွေကိုလဲကြည့်ကြပါအုံး။ တချို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေများဆို ရောဂါကြောင့် အဝတ်အစားတောင် သေသေချာချာ လုံအောင်မဝတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးသူတွေအတွက် အလှူခံတဲ့အခါ ပုံမပါဘဲ စာနဲ့တင်အလှုခံမရဘူးလားလို့ ကျမတခါ၊ တခါတွေးမိပါတယ်။ ပုံလေးပါမှ ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်လဲ မျက်နှာမပါအောင် ရိုက်လို့မရနိုင်ဘူးလား။ မျက်နှာမရိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် ရောဂါဖြစ်တဲ့နေရာက လူတယောက်ရဲ့ လှို့ဝှက်အပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဆို ကလေးဖြစ်ဖြစ်၊ လူကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ အဖိုးကြီးအဖွားကြီး ဖြစ်နေအုံး မတင်သင့်ပါဘူး။ Share လဲ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျမကမြင်ပါတယ်။ ကျမသိသလောက်တော့ ဒီလိုပုံတွေမြင်လို့ လှုချင်စိတ်ပေါက်လာသူတွေရှိသလို "ဟယ် သနားပါတယ်၊ စိတ်ညစ်စရာကြီး၊ မကြည့်ရဲဘူး " ဆိုတာတွေလဲ အများကြီးပါ။ ဒီလိုပုံတွေကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ အလှုငွေဘယ်လောက်ကောက်ခံရရှိသွားသလဲဆိုတာကျမတော့မသိပါဘူး။ News Feed မှာတခါမှ တတ်မလာပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ဒီလိုပုံတွေ တင်မဲ့ Shareမဲ့အစား အကူအညီပေးနိုင်မဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကို အကြောင်းကြားပေးတာ မျိုးပိုပြီးဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် pageမှာသွား Shareရင်တောင် "Limited audience" ပါ။ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ရဲ့ page မို့လို့ "right audience" ပါ။ ပြီးတော့မှ ကိုယ့် Friend list ထဲကသူတွေကိုသိစေချင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ pageကို သွားပြီးကြည့်ဖို့ status လေးရေးတင်ရင် ပိုပြီးကောင်းမယ်မဟုတ်လားရှင်။
နောက်တမျိုးက ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ကောင်းတဲ့သတင်းရော၊ ဆိုးတဲ့သတင်းပါ ( အထူးသဖြင့် ဆိုးတဲ့ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းပေါ့လေ) Share ကြတာပါ။ ကိုယ့်နယ်မြေကိုယ့်ဒေသက မဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ နေရာတွေ၊ ကျန်းမာရေး လူမှုရေး အရ နေထိုင်ဖို့ မသင့်လျှော်တဲ့ ဒေသက သူတွေအကြောင်း၊ တောင်သူဦးကြီးတွေနဲ့ ပြသနာ၊ အလှမယ် မေမြတ်နိုးကိစ္စ၊ စစ်ပွဲတွေအကြောင်း၊ လွှတ်တော်အမတ် ကိုထီးဆောင်းပေးသင့် မပေးသင့် စသဖြင့်ပေါ့လေ.. ဘိုလိုတွေရော မြန်မာလိုတွေတွေ ကိုယ်စိတ်ထဲ ခံစားရရင်ရသလို ရေးနေ၊ Share နေကြ တာပါ။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှစ်ပတ်လည် အတွက်အရင်က ဘုန်းဘုန်းတွေနဲ့ စစ်သားတွေနဲ့ ပုံတွေ တို့ လောလော လတ်လတ် ဖြစ်သွားတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးကပုံတွေတင်ပြီး မမေ့ကြဖို့ လှုံ့ဆော်စာတွေကလဲ မကြာမကြာ News Feed မှာတတ်လာပါတယ်။ "ဟေ့ ဒါတွေက သတင်းအမှန်တွေ။ မေ့မသွားသင့်တဲ့အရာတွေမို့ သတိပေးတာ မှားသလား" ဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ သတိပေးစရာလိုသလားလို့ မေးရင် ကျမတယောက်ထဲအနေနဲ့ဆို မလိုပါဘူး။ သတိမပေးလဲ ကျမရင်ထဲမှာစွဲနေအောင်အဖြစ်အပျက်တွေကမှတ်မိပြီးသားပါ။ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တောင် ဘုန်းဘုန်းတွေက စစ်သားတွေ စစ်သေနတ်တွေရှေ့ ထိုင်ရှိခိုးနေပုံတွေ၊ စစ်သားတွေ ရဲတွေက ဘုန်းဘုန်းတွေ ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်နေပုံကို ထပ်ခါတလဲလဲ တင်ဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ "ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး"လို့ စာတကြောင်းရေးလိုက် ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ သိပြီးသားပါ။ အနာဟောင်းပြန်ဖော်နေစရာမလိုဘဲ အနာရွတ်တပိုင်းတစပြရုံနဲ့ နာပြီးသားပါ။ အတိတ်ဆိုးတွေကိုပြန်ဖော်တာ မှားလားမှန်လားမသိပေမဲ့ "နင်တို့ နိုင်ငံမှာ ခုထိ ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့ ပြသနာ တတ်တုံးလား" လို့တော့ ထင်ရောင်ထင်မှားအမေးခံခဲ့ဘူးပါတယ်။ နောက်ထပ်တခု ဥပမာပေးရရင် လွှတ်တော်အမတ်ကို ထီးဆောင်းပေးတဲ့ ကိစ္စ ဆိုပါတော့။ ဒီသတင်းကို ဘယ်လောက်များ ဖြန့်ကြသလဲဆိုရင် နိုင်ငံခြား မီဒီယာအထိတောင် ရောက်ပါတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်သလဲလို့ မမေးပါနဲ့။ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သတင်း ရောက်တာက ပြသနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တယောက်ကနေ တယောက် ထပ်ဆင့်ပြီး Share လိုက်ကြတာ သတင်းစာတခု ( Straits Times လို့ ထင်ပါတယ်။ ) က ဘာသာပြန်လိုက်တာ" မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ထီးဆောင်းပေးတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်" တဲ့။ ဒီသတင်းကိုယူလာတာက ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အမျိုးသမီးပါ။ "နင်တို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ထီးဆောင်းပေးတာ ဘာလို့ရှက်စရာကောင်းတာလဲ။ ငါအခုပဲ သတင်းထဲဖတ်လိုက်ရတယ်" တဲ့။ "ငါက နင်တို့နိုင်ငံမှာ Gender discrimination မရှိဘူးထင်တာ" တဲ့။ ကြည့်ပါအုံး စကားတွေ ကားသွားလိုက်တာ။
နောက်တခု ဥပမာပေးပါအုံးမယ်။ စလုံးမှာ တက်စီ( Taxi) စီးကြရင် တခါတခါ ကားမောင်းတဲ့သူရဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအထင်သေးသလိုလို ဘာလိုလိုအပြောတွေကို ခံရဖူးမလား မသိဘူး။ ကျမနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းအချို့တော့ ခံရဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုထွက်လာနိုင်တာ ဘယ်လောက်ကံကောင်းကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဆက်နေရင် အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း၊ သူတို့နိုင်ငံကိုအတုယူသင့်ကျောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ပွဲတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေများလို့ သွားမလည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်နီးချင်းထိုင်းကို သဘောကျကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး လူမှုရေး နိမ့်ကျကြောင်း သာသာနဲ့နာနာနှက်တဲ့အပြောတွေပေါ့ရှင်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့နေရာတွေရှိတာမှန်ပေမဲ့ သူတို့ထင်သလိုအစစအရာရာ နိမ့်ကျနေတာတော့လဲမဟုတ်ပါဘူး။ မခံနိုင်တော့ ပြန်ပြော၊ ပြန်ပြောတော့ ခရီးသွားရတာ စိတ်မချမ်းသာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ပြင်စရာတွေ သူများကိုအတုယူပြင်ဆင်စရာတွေရှိပေမဲ့ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဘလိုင်းကြီးပြောဆိုနေတာမျိုးဆိုသီးမခံနိုင်၊ ဒါနဲ့တရက်တော့ ဘာလို့များ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လဲမရောက်ဘူး၊ သေသေချာချာ ထဲထဲဝင်ဝင် မသိဘဲများ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကောမန့်ပေးနေသလဲလို့ ပြန်မေးမိတော့ " ဖေ့ဘွတ်မှာမြင်နေရတာပဲ" တဲ့။ "ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကထွက်" ဆိုသလိုပါပဲ။ ကျမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်ထဲမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလဲ သူတို့ ပြသနာနဲ့ သူတို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် pageတွေမှာ တင်တာ Shareတာ မမြင်ရသလောက်ပါပဲ။
"ငါတို့ရေးတာတွေ တင်တာတွေက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းသိစေချင်လို့ ဖတ်စေချင်လို့ Share တာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ မြန်မာအားလုံးဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး "လို့ ပြောမဲ့သူများရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာအချင်းချင်းအတွက်တော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူများနိုင်ငံသားတွေအဖို့ မြန်မာအားလုံးတူတူပါပဲ။ မြန်မာအားလုံးသည် ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး မြန်မာအားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါက မြန်မာမို့လားဆိုတော့လဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ သူတပါးနိုင်ငံမှာနေတဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတိုင်း သိမ်းကျုံးပြီးအပြောခံ၊အထင်ခံရတာမျိုး မကြာခဏခံရတတ်ပါတယ်။ ဟိုးတလောလေးတုန်းက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားအမျိုးသားသူနာပြုတယောက်က စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကို ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ထိုးနှက်ရေးသားခဲ့တဲ့ ပြသနာတခုဖြစ်ခဲ့ပါပါ။ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီနိုင်ငံသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသာအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်ကို မေးနေတာ ကြားဖူးပါတယ်။ " နင်ကြားပြီးပြီလား။ နင်နဲ့သိလားပေါ့" ။ ကျမအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်က ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးအချင်းချင်းပေမဲ့ သိန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ တဦးကိုတဦးသိဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ "ဒါနဲ့များတောင် ငါနဲ့သိလား။ ဘယ်လိုထင်သလဲ" လို့ ငါ့ကိုလာမေးတယ်လို့သူငယ်ချင်းမကငြီးရှာပါတယ်။သူတို့အိမ်က အိမ်အကူအမျိုးသမီးလေးတွေ ဟင်းမချက်တတ်တာ၊ သန့်ရှင်းရေးမတော်တာ၊ စာရိတ္တမကောင်းတာတွေကအစ ငါ့ကို ဘာရယ်မဟုတ်လာပြောကြသေးတယ်လို့ သူကပဲဆက်ပြောပြပါတယ်။ ပြောချင်တာက တချို့တချို့သောသူတွေက လူတဦးတယောက်ချင်းဆီကို ခွဲခြားမမြင်တတ်ဘူးဆိုတာလေးပါ။
ဖေ့ဘွတ်မှာနောက်ထပ်တမျိုးတွေ့ကြရမှာတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘဝကူးမကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ပုံများကို သတင်း pageများ တင်သလို သေဆုံးသူများရဲ့ မြင်လို့မကောင်းသော သွေးသံရဲရဲ ပုံများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းပြတ်များ၊ မီးလောင်သွားသော အစိတ်အပိုင်းများ ကို သတင်းအနေနဲ့ ဖောဖောသီသီ လွယ်လွယ်ကူကူတင်နေကြတာပါ။ ကျမကတော့ ဒါကိုအင်မတန်မလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဘဝကူးသွားတဲ့ သူကိုရော၊ ကျန်ခဲ့သူတွေကိုရော မလေးစားရာရောက်ပါတယ်။ ကျမတို့တွေအားလုံး မိသားစုဝင်တွေထဲကဖြစ်ဖြစ် ခင်မင်ရင်းနီးတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲကဖြစ်ဖြစ် ဆုံးရှုံးဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတယောက်ရဲ့ သွေးသံရဲရဲ သေဆုံး ပုံတွေကို တကမ္ဘာလုံးသိအောင် ဘယ်သူမှ ပြချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုတိုင်ဆိုရင်ရော။ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ သတင်း pageများ က ဗဟုသုတအလို့ငှါ ပညာပေး ( ကား သက်မှတ်ထားတဲ့ အရှိန်ထပ် ပိုမောင်းလို့၊ ဓာတ်ကြိုးပေါက်လို့၊ ဂက် (Gas) အိုးမလုံလို့) တင်ခဲ့ရင်တောင်မှ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဒီလိုသတင်းမျိုးသဘောသိပ်ကျရင် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းpageမှာ Like ပေး၊ ကောမန့်သွားပေးလိုက်ပါ။ Public ကို Share စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့သိလို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုသိစေချင်လို့ဆိုရင်လဲ သတင်း pageရဲ့ Link လောက် အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို စာရေးတင်ရင် လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
လောလောလတ်လတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ရင်သား ပြသနာကိုလဲပြောချင်ပါသေးတယ်။ ပထမဆုံးသတင်းတွေ့တုန်းက သူ့ကို နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမရဲ့အမျိုးသားမှန်း မသိပါဘူး။ ကျမအနေနဲ့ပြောရရင်သိစရာမလိုပါဘူး။ သူလုပ်ခဲ့သောအမှုသူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ အခုဆို ထိုဆရာဝန်နဲနဲ့ လူချင်းအပြင်မှာသိတဲ့သူများက သူ့အတွက် testimonialတွေရေးတင်ဖို့ Petition လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါပြီ။ ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လုပ် သူဒီအမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားရင် လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လဲ သူ့အတွက် ရပ်တည်ပေးမဲ့သူရှိတာဝမ်းသာရမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးလေးကအပြစ်မရှိပါဘူး။ ဘာလို့များ အဲဒီဆရာဝန်ဟာ နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမရဲ့အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်ကပြောထားတဲ့ ( သူတို့အပြောအရ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းကြောင်း၊ မိန်းမနဲ့ ကလေးကို အင်မတန်ချစ်ကြောင်း ကြွားဝါထားတဲ့) အပြောတခြား၊ အလုပ်တခြားဖြစ်နေကြောင်း ရေးတင်နေကြသလဲ ကျမစဉ်းစားမရပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျမက ဆရာမရဲ့ ပရိတ်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအမှုမှာလဲ သူ့အမျိုးသားနဲ့ မသိတဲ့အတွက် သူဒီလူမှုရေးပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သလား၊ မကျူးလွန်ဘူးလား မခန့်မှန်းတတ်ပါဘူး။ Petition မှာလဲလက်မှတ်ထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ မဆိုင်တဲ့ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးလေးကို မပါစေချင်ယုံသက်သက်ပါ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဘာမှမရေးဘဲ မ Shareဘဲနေရင်တောင် အမှုဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက သူတို့မိသားစု ဘယ်လိုမှ စိတ်မချမ်းသာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဆိုးပြီးသားအခြေအနေတခုမှာ အကြောင်းအရာ ဂဂနန မသိဘဲShare လေးနှိပ်ပြီး " ရေနစ်သူ ဝါးကူထိုး" နေကြတဲ့ postတွေကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
သေသေချာချာမသိဘဲ အတင်းကာရော Shareကြတဲ့ အထဲမှာ နောက်တခုရှိပါသေးတယ်။" ကိုဘယ်သူ မဘယ်သူ က လူလိမ်တွေပါ။ အလုပ်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီး ဘယ်လောက်လိမ်ပါတယ် ဘယ်လိုလိမ်ပါတယ်ဆိုပြီး" တယောက်ယောက်ကသာ ရေးပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ရေးတင်လိုက် ဖေ့ဘွတ်မှာ လှိုင်လှိုင်ကြီးဆဲကြ ၊ဆိုကြ ၊Shareကြပါလိမ့်မယ်။ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲ တခါတခါ ကလေးချီထားတဲ့ပုံတွေလဲပါ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရုပ်တွေလဲပါ။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ပြန်ပြီး Shareကြတော့တာပါပဲ။ " မသိဘူးနော်။ သူများက Shareပါဆိုလို့ " ဆိုတာမျိုးရေးပြီးShareကြတာတွေလဲမြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဟုတ်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ဒီလူသူများတွေကိုထပ်လိမ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။ မဟုတ်ရင်ရော။ ဖေ့ဘွတ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းခပ်များများရှိတဲ့အကောင့် တခုပိုင်ဆိုင်ရုံနဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ဘဝကိုဖျက်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနေရာဖြစ်သွားပါပြီ။
ဖေ့ဘွတ်ဆိုတာလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပါ။ နောက်ဆုံးစစ်တမ်းတွေအရ ဖေ့ဘွတ်ကိုသုံးတဲ့သူက သန်း၅၀၀ကျော်ရှိလာပီး လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ထက်ကိုပိုလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်က အွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာတခုဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ page တွေက ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတွေပေါ့။ ဝေါ (wall) ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ post တွေက အိမ်တခုရဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေက အိမ်နီးချင်းတွေလို့ မြင်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဖေ့ဘွတ် ဒါမှမဟုတ် virtual world တခုရဲ့အားသာချက်ကတော့ အာဖရိကကသူတယောက်က မြန်မာပြည်ကသူငယ်ချင်းကို နေ့တိုင်းလာလည်လို့ရသလို မြန်မာပြည်ကနေလဲ ကနေဒါကသူငယ်ချင်းဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ သိနေနိုင်ပါပြီ။ ကိုယ့်အိမ်ကို တကူးတက လာလည်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ ပြတင်းပေါက်နားက မတော်တဆဖြတ်သွားတဲ့သူကိုဖြစ်ဖြစ်၊ စပ်စပ်စုစုနဲ့ချောင်းကြည့်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်လူမျိုးအကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း ဘာတွေလှစ်ဟပြချင်လာလဲဆိုတာကို တွေးဆကြစေချင်ပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 07:592comments: